Ay Ka Mid Yihiin Sawirada Instagram Kordhinta Hawlgelinta Email 7x | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 19, 2015 Sabti, Febraayo 4, 2017 Douglas Karr
In Xaaladda Ganacsiga Muuqaalka, daraasad ay samaysay Qaliinka iyo Ururka Suuqgeynta Internetka, kaliya 8% suuqleyda ayaa si xoogan u rumeysnaa inay si wax ku ool ah u adeegsanayeen sawirro si ay u wadaan kaqeybgalka emaylka.
76% emailada waxaa kamid ah badhamada warbaahinta bulshada laakiin kaliya 14% e-mayllada waxaa kamid ah sawirada bulshada.
Ballanqaadka asalka ah ee warbaahinta bulshada wuxuu ahaa awoodda noocyada inay abuuraan xiriir shakhsiyadeed oo badan iyo macaamiishooda. Tani waxay ka dhigeysaa shirkadaha labadaba kuwo la soo dhaweyn karo iyo kuwo lagu kalsoonaan karo. Ku darso xaqiiqdaas koritaanka qarxa ee sawirrada ee baraha bulshada, mana aha wax lala yaabo in isku-darka warbaahinta bulshada iyo sawirku ay awood badan yihiin. Ku dar tan si aad ugu riixdo fariimaha macaamiishaada, oo waxaad uun noqon kartaa wax uun!
Markaad eegto magacyada bilaabay inay ku adeegsadaan sawirrada 'Instagram' emayllada dhexdooda, faa'iidooyinka ayaa cad. Mid ka mid ah dukaamada taam ahaanshaha, tusaale ahaan, wuxuu keenay wiish 7X ah oo ku lug leh sawirrada sheyga ee boggooda kaliya 24 saacadood ka dib markii ay direen e-maylkoodii ugu horreeyay ee 'Instagram'.
Daawee oo Khad dhaqaajin kara abuuray infographic soo socda, Instagram + Email: Taariikh Jacayl Casri ah.
Tags: daaweynemaylka iyo arrimaha bulshadaemaylka iyo baraha bulshadaInstagraminstagram infographicururka suuq geynta internetkakhad dhaqaaqobulshada iyo emaylkawarbaahinta bulshada iyo emaylkaganacsiga muuqaalka ah